आज गुरु पुर्णिमाको दिन लाग्दैछ वर्षकै तेस्रो चन्द्र ग्रहण, यी ५ राशिलाई हुनेछ अशुभ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/आज गुरु पुर्णिमाको दिन लाग्दैछ वर्षकै तेस्रो चन्द्र ग्रहण, यी ५ राशिलाई हुनेछ अशुभ!
आज ५ जुलाई गुरु पूर्णिमाको दिन वर्षकै तेस्रो चन्द्र ग्रहण लाग्दैछ। यो उपछाया चन्द्र ग्रहण हुने भएकोले चन्द्रमाको आकारमा भने कुनै असर पर्दैन। यसको मतलव चन्द्रमा अरुबेलाको जस्तै सामान्य आकारको देखिनेछ। तर चन्द्र ग्रहणको राशिमा प्रभाव भने पर्नेछ , जसको कारण हाम्रो जीवनमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर पर्छ। भोलि लाग्ने चन्द्र ग्रहणको कारण ५ राशिका व्यक्तिहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्दैछ। त्यसैले उनीहरु निकै सतर्क हुन जरूरी छ।